Indawo kaBurke, iNtaba yaseCarrigeen
Kilbeheny, Limerick, Ireland
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguKathleen
Indawo kaBurke ibekwe kwindawo engasese kwiNtaba yeCarrigeen, ezantsi kweGaltymore ngaphezulu kwelali yaseKilbeheny, kwiLimerick County. Simi phezu kwentaba kwaye singqongwe ngamaphandle amahle kunye nohambo lweenduli olunoxolo.
Eli likhaya elikhulu, elitofotofo losapho elilungele ukuba iindwendwe ziphumle ekupheleni kosuku lokubukela okanye lokuhamba endulini okanye ukubaleka nje kuxinzelelo lwemihla ngemihla. Sinikezela ngegumbi eliphindwe kabini kunye negumbi elinye. (Igumbi elinye lidweliswe ngokwahlukeneyo).
Indawo yaseBurkes ikwindawo efihlakeleyo kwiNtaba yeCarrigeen, ezantsi kweGaltymore ngaphezulu kwelali yaseKilbeheny, kwiLimerick County. Simi phezu kwentaba kwaye singqongwe ngamaphandle amahle kunye nohambo lweenduli olunoxolo.
Sinekhaya elikhulu, elitofotofo losapho kwaye siye samkela usapho nezihlobo kwikhaya lethu kangangeminyaka emininzi njengoko abantwana babekhula. Ngoku singathanda ukunika ikhaya lethu kunye nobubele kwiindwendwe zakwa-Airbnb njengoko indlwana yethu isaqhubeka ingabi nanto. Indawo kaBurke yeyona ndawo ifanelekileyo yokuphumla emva kokuhamba kwenduli yosuku okanye ukujonga indawo okanye ukuchitha ixesha kude nobuphithiphithi bobomi bemihla ngemihla. Singakwazi ukuhlalisa ukuya kwiindwendwe ezi-3 kunye negumbi elikhululekile eliphindwe kabini kunye negumbi elinye. Igumbi elinye liluhlu olwahlukileyo kodwa lingabhukishwa kunye negumbi eliphindwe kabini. Njengoko siziikhilomitha ezisi-7 ukusuka kwidolophu ekufutshane sinikezela ngesidlo sakusasa esilula kuzo zonke iindwendwe ukuze sikubekele usuku. Isidlo sakusasa sibandakanyiwe kumaxabiso egumbi. Ngentlawulo eyongezelelweyo sinokubonelela ngesidlo sasemini esipakishiweyo kunye nesidlo sangokuhlwa ukuba siyafuneka.
4.96 ·Izimvo eziyi-23
INtaba yeCarrigeen ikwi-County Limerick ngaphakathi koluhlu lweeNtaba zeGalty kumda wengingqi yeTipperary kunye neCork. Indlu ijonge emazantsi ngoko ke kukho iimbono ezintle zeentaba zeKnockmealdown zaseTipperary naseWaterford. Xa uphuma emnyango kukho ukuhamba okunintsi kulo lonke inqanaba lokuqina nokuba uyafuna ukunyukela encotsheni yeGaltymore okanye ukonwabele ukuhamba ngokuzolileyo.
Igama elithi "Galty" lithatyathwe kwi "Mountains of the Forests" ngesiNgesi. Iintaba zeGalty zezona ntaba ziphakamileyo zaseIreland.Eyona ncopho iphakamileyo yiGaltymore enyuka iye ku-3009 Ft.
Kukho amachibi ama-5 e-corrie kuluhlu lweentaba kubandakanya iLough Musky, iLough Curra, kunye neLough Bohreen. Kumda ongaphandle weeNtaba zeGalty kukho iNtaba yeMoanour. Inxalenye yale ntaba iye yakhuselwa njengeNdawo eKhethekileyo yoLondolozo ngenxa yobukho bendawo yokuhlala enengca enqabileyo kunye nezityalo ezinqabileyo ze-arctic alpine ezifana neorchid encinane emhlophe.
Phakathi kweeNtaba zeGalty kunye neSlievenamuch Ridge yiGlen yaseAherlow, intlambo entle emangalisayo ekwadume kakhulu ngabahambi. Kukwakho nokuhamba okufutshane kwalapha ekhaya okuthatha indawo entle kunye nokubadwa kwendawo.
Singakucebisa ngokuhamba kwasekhaya okanye intaba kwaye sinokukunika iimephu ukuba ziyafuneka.
Ilali yaseKilbeheny kukuhamba kwemizuzu eli-10 ukusuka endlwini kwaye idolophu ekufutshane yiMitchelstown ekumgama wemizuzu engamashumi amabini. Kukuhambo lwemizuzu eli-15 ukuya kwi-M8 (ikhonkco leMotro phakathi kweDublin neCork). IsiXeko saseCork kunye nesiXeko saseLimerick zimalunga neyure yokuhamba ngemoto.
Iindawo ezinomdla zendawo ziquka iCahir Castle kunye ne-Swiss Cottage, i-Rock of Cashel, i-Mitchelstown Caves, i-Lismore Castle & Gardens, i-Mount Mellary, i-Vee Valley enhle kunye ne-Glen yase-Aherlow. Singakucebisa kwiindawo zokutya zendawo, iziganeko njl. kutyelelo lwakho.
Indawo kaBurke ilungile kubahambi benduli okanye iindwendwe ezifuna ukwazi indawo yendawo. Nokuba uyintoni na umsebenzi zonke iindwendwe zinokuphumla kwindawo enoxolo, enobuhlobo, ekhululekile.
UTata wazalelwa eBurkes Place kwaye uMama wazalelwa kwidolophu eselumelwaneni yaseCarrigeen. Indlu ibisoloko isaziwa njenge Burkes Place ke siligcinile igama. Abazali bam babeyinxalenye yokufuduka kwabantu abaninzi entabeni ngeminyaka yee-1950 yaye bazenzela ubomi eNgilani. Njengabantwana sichithe ihlobo lethu apha ngoko ke ndinonxibelelwano olukhulu lweemvakalelo entabeni. Indlu katata yathengiswa ngaphandle kosapho kodwa kwiminyaka engama-20 kamva mna nomyeni wam sathenga indlwana kunye nomhlaba wokukhulisa usapho lwethu.
Umbuki zindwendwe ngu- Kathleen
I am living in County Limerick with my husband. We have four children and two grandchildren. We love visiting new places, especially if they are not the usual tourist haunts and now have more resources to do so now the kids are grown. We are also runners (but not marathons!) food lovers and Springsteen fans! We love to meet new people and see new places both in Ireland and further afield. We have just become Airbnb Hosts ourselves as we live in the beautiful Galty Mountains in County Limerick. We have had many friends and family staying with us over the years so it is timely that now our nest is emptying we will be hopefully welcoming people from Ireland and overseas.
I am living in County Limerick with my husband. We have four children and two grandchildren. We love visiting new places, especially if they are not the usual tourist haunts and no…
Eli likhaya losapho ngoko kuhlala kukho umntu oza kuphendula nayiphi na imibuzo onokuba unayo. Iindwendwe zinokuba nezinto zabucala okanye zikhethe ukuncokola nosapho. Kuxhomekeke ngokupheleleyo kwizinto ezikhethwa ziindwendwe.